Mpivarotra omby halatra In-droa saika hanao kolikoly tamin’ny zandary
Antsahakely-Ambohidrapeto Mpangalatra no manjaka mandritra ny « couvre-feu »
Mila ho isan’andro no andrenesana vaky trano sy halabotry raha ny tatitra hita amin’ny tambazotran-tserasera sosialy facebook.
Disadisam-piarahamonina sy politika Ben'ny tanànan teo aloha, nisy nitifitra
Voasambotra ireo jiolahy miisa dimy nanatanteraka mivantana ny fanafihana sy fitifirana ny Ben'ny tanàna teo aloha mivady ao Erada Distrika Ambovombe Faritra Androy.
Halatr`omby tany Befihamy Tafaverina ireo omby 86 nangalarin` ny dahalo
Nitrangana halatr’omby indray tany Befihamy Kaominina ambanivohitra Marotsiraky, ny alin’ny 07 jolay 2020 lasa teo, ka omby 86 no lasan’ny dahalo tamin’izany.
Analamahitsy Nasaina nifona tamin’ny vahoaka ilay mpangalatra
Lehilahy iray fantatra fa any Ambatofotsy no tratran’ny fokonolona nangalatra omaly talata vao maraim-be teny Analamahitsy.
Sambava Tratra ny vola sandoka sy basy vita gasy maro be
Andian-jiolahy mpanao vola sandoka sady mpanefy basy poleta vita gasy tany amin'ny faritra Sava no tratra.
Mpivarotra omby halatra miisa roa no tra-tehaky ny Zandarimaria nitondra sy nivarotra omby tsy misy taratasy tany Antandrokomby Anosibe an’ala ny andron'ny 04 jolay 2020.
Raha ny angom-baovao voaray dia efa fomba ratsy fanaon'izy ireo izany ka isan-kerinandro dia omby halatra am-polony avy any amin'ny kaominin’ Antandrokomby sy Ambalomby, distrikan’ Anosibe an’ala, no entin'izy ireo hamidy any Andramasina, faritra Analamanga, sy Antanifotsy, faritra Vakinakaratra, ary tsy mandalo ny sampandraharaha manara-maso ny taratasin'omby. Rehefa natao ny famotorana savaranonando dia niaiky ny heloka vitany izy ireo. Taorian'izany dia nanolotra vola ho an'ireo Zandary mpanao famotorana izy ireo ho tambin'ny famotsorana saingy nandà izany ireo zandary, raha ny fanazavana. Nitohy ny famotorana ka ny 08 jolay 2020 dia tratra ihany koa ireo naman'izy ireo hafa izay efa nivarotra ny omby tany amin'ny tsenan’omby Alatsinainy Bakaro Andramasina. Rehefa tonga tao amin'ny biraon'ny Toby zandarimaria Anosibe an’ala ireo olona roa hafa dia mbola niezaka nanolotra vola 500.000 ariary ihany koa ho tambin'ny famotsorana sy handravonana ny raharaha. Nandray andraikitra avy hatrany ny Manamboninahitra komandin'ny fandrindràna (OFFCOORD) ny Zandarimaria ao Anosibe an’ala, ka niantso ny Lefitry ny Ben'ny tanàna sy ny Filohan'ny fokontany Anosibe an’ala hatao vavolombelona, hoy hatrany ny fanazavana.